ငရဲမင်းကြီးရဲ့ဟားတိုက်သံ (Maung Luu Yay) | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်လူရေး၊ နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကို ပုံဖေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သစ်ပင် တောတောင်ရေမြေတွေတွင်မကဘဲ အဲဒါတွေကို တည်မှီနေထိုင်ရင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ဒေသခံနေထိုင်သူတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း အထောက်အထား၊ လူမှုဘဝတွေကိုပါ တွဲကြည့်မှ ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ သဘာဝရင်းမြစ်တွေကို ထုတ်ယူ လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် သူ့ကို တည်မှီနေတဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ၊ လူမှုဘဝ တွေပါ ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။ အပြန်အလှန်ပါဘဲ အဲဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်မှီ နေထိုင်ရင်း အလိုလို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုပြုနေတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ လူမှုဘဝတွေ ဖရိုဖရဲ ပြိုကွဲပြီဆိုရင်လဲ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ၊ သမိုင်းအထောက်အထားတွေပျောက်ဆုံးပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လဲ ပျောက်သွားရပါတော့တယ်။
ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ဒေသရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလ ဝိသေသတွေ တည်ရှိနေရေးထက် ကိုယ့်ဒေသကိုအရင်းပြုပြီး အခြားဒေသတခုရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးက ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ဘယ်လိုမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေ ပျောက်သွားတာဟာ ကိုယ့်ဒေသပျောက်ဆုံးသွားတာပါဘဲ။ ကိုယ့်ရပ်ရွာပျောက်သွားတာပါဘဲ။ ကိုယ့်ဒေသပျောက်သွားတာဟာ ဒေသနေလူတွေအတွက် ဘယ်တော့မှ အမှန်တရား ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဒေသပျောက်ဆုံး သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးမဟုတ်၊ ဘီလူးရီသံဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်မျိုးတွေမှာ ပျော်ရွင်မှုဆိုတာဟာ တည်ရှိနေတာသာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ ပထဝီရေးရာစိတ်ချမှုပါ။ ဒါ ဒေသကပေးတဲ့ ခွန်အားပါ။ နေရာပျောက်ဆုံးသွားတာဟာ ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားမှု၊ ကစဥ့်ကလျားဖြစ်မှုကိုသာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားမဲ့သွားသူမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလဲ အလေးထားမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုက မရေရာတော့တဲ့ အခြေအနေရောက်သွားတာကိုး။ နိုင်ငံတော်က သူ့ကို သူ့ဒေသကို၊ သူ့အမှတ်အသားတွေကို ဘာမှ အကာအကွယ်မပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့လေ။
တကယ်လို့ အဲဒီ ပျောက်ကွယ်ဆုံးရှုံးသွားမှုတွေနေရာမှာ ဖြည့်စွက်ချက်တွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေ၊ အစားထိုးမှုတွေမှာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ သမိုင်းတန်ဖိုးတွေ၊ လူမှုဘဝတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတွေ၊ ဓလေ့တွေ ကပ်ပါမလာတော့ဘူးဆိုရင်၊ နေမကောင်းတဲ့လူတယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေသာ ဖြစ်မှာပါဘဲ။ ဒါဟာ သူ့အတွက် ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်တဲ့အရာတွေ၊ တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာဟာ ပျော်ရွင်ကျေနပ်မှုမပါဘူးဆိုရင် သူ့တန်ဖိုးကို ဘာနဲ့ ဘယ်လို တွက်မှာလဲ။ တန်ဖိုးတွက်မရတဲ့အရာတွေဟာလဲ လူ့အဆောင်အယောင်၊ အဆင်တန်ဆာ မဖြစ်နို်င်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လူမှုဘဝအတွက် အထောက်အကူ မဖြစ်ပါဘူး။ သစ်ပင်တပင်နဲ့ တိုက်တလုံးဟာ လူတွေကို ကျေနပ်မှုပေးစွမ်းနုိုင်တာချင်း လုံးဝမတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တိုက်က ပိုကောင်းတယ်လို့ ပိုင်းဖြတ်ပြီး သစ်ပင်ကို ခုတ်လှဲလိုက်တာဟာ ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှု မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တိုက်ဆောက်ဖို့ နေရာလွတ်ရှာတာသာ ပိုကောင်းတဲ့စီမံလုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူတွေရဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေ၊ စိုးရိမ်သောကဖြစ်နေရတာတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာနဲ့ အလဲအထပ်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် လူတွေမပျော် မရွှင်တဲ့အရာကို လူတွေအတွက်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ ရမှာလဲ။ နောက်ပြီး အသက်ရှူရတာ မကောင်းတော့ဘူး၊ သောက်ရေတွေ၊ သုံးရေတွေပျက်စီးပြီး ရောဂါ တွေရလာမယ်ဆိုရင် အဲဒီမီးခိုးထွက်နေတဲ့၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေထုပ်နေတဲ့ စက်ရုံတရုံဟာ အဲဒီဒေသခံတွေ အတွက် ငရဲမင်းကြီးရဲ့လက်ဆောင်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆိုးကျိုးတွေကို တစက်မှ မခံစားရဘဲ အကျိုး အမြတ်တွေသာ ရယူနေတဲ့ တခြားတနေရာက စာရွက်ကိုင်လူတန်းစားတစုကတော့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလို့ အော်နေမှာပေါ့။ ဒါ သူတို့အတွက်ဘဲလေ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ဒေသခံတွေအပေါ် လူသားဘဝ၊ လူနေမှု ဘဝအပေါ်၊ လူ့မျိုးဆက်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ကြေးနီစီမံကိန်းတွေဟာ ဒေသခံတွေအတွက် ဘာဆိုဘာမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှု မရှိပါဘူး။ သူတို့ လုံးဝမသိတဲ့၊ သူတို့နဲ့ ဘာအဆက်အစပ်မှ မရှိတဲ့သူတွေက ဒီဒေသနေသူတွေရဲ့တည်မှီရာကို၊ ယုံကြည်ရာကို၊ တန်ဖိုးထားမှုတွေကို၊ သမိုင်းအထောက်အထားတွေကို၊ သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် မြေလှန်ဖြိုဖျက်ပစ်နေတာပါ။
ကြေးနီစီမံကိန်း တာဝန်ခံလူကြီးဦးအောင်မင်းက စီမံကိန်းဧရိယာမှာရှိတဲ့ ရွာ ၂၆ ရွာနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ “မင်းတို့ရွာကရေ တွေ ခွေးတောင် မသောက်ဘူး” ထုတ်ပြောရက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုသိရက်နဲ့ အဲဒီရေတွေကို ဒေသခံတွေကို သောက်စေတာဟာ သူတို့ပြောတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဘဲ။ မစွမ်းမသန်၊ လူစဉ်မမီတဲ့ကလေးတွေ မွေးလာတာဟာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဘဲ။ တနယ်လုံး အဆိပ်သင့်နေပြီ။ တကယ်ပါ၊ ဒါဟာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါ။
ဒီဒေသတခုလုံးရဲ့ လူနေမှုဘဝသုဉ်းသွားမှုကို ဘာနဲ့ အစားထိုးမလဲ၊ ဘယ်လို ကုစားမလဲ။ ကျန်းမာတဲ့လူ့အသိုက်အမြုံတခု ပျောက် ဆုံးသွားတာဟာ ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကပေးတဲ့ ဆုလာဘ်ပါ။ ဒေသခံတွေအတွက် တရားမှုဆိုတာ ဘယ်ကရှာရ မှာလဲ။ ကိုယ့်ဒေသနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ လူတယောက်က ကိုယ့်ဒေသကလူသားတွေအပေါ် စီမံနေတာဟာ၊ နေရာချထားတာဟာ ဘယ်တော့မှ သင့်တော်မှန်ကန်တယ်လို့ ဆိုမရပါဘူး။
အဲဒီလိုပါဘဲ ဒီဒေသကလူတွေရဲ့ အခွန်အထုတ်တွေစား၊ ယူနေတဲ့အစိုးရတရပ်ဟာ ဒေသခံတွေရဲ့ အသဘာဝဘေး၊ အမနုဿဒဏ်တွေကို ဥပေက္ခာပြု၊ လုံးဝအကာအကွယ်မပေးဘဲ သူတို့အကျိုးစီးပွားသက်သက်အတွက် ဒေသကို ဖြိုဖျက်သူတွေကို အထောက်အကူပေးနေတာဟာ ဘယ်လိုမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။ လက်ပံတန်းတောင်ကိစ္စမှာ မိခင်နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ သားတော် စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ဦးပိုင်ဟာ နိုင်ငံတော်လား၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတခုလားဆိုတာလဲ သမတကြီးအပါအဝင် ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တာဝန်တွေယူထားတဲ့ လွှတ်တော်ကြီးကလဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမိန့်ဆိုပါဘူး။ ဦးပိုင်ဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘိုးအေကြီးလို၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေစားအမွေခံသားလို လုပ်ဆောင်နေတာဟာလဲ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရပါဘူး။
လူ့ယဉ်ကျေးမှုတခုကို သင်းကွပ်သူတွေတဖြစ်လဲ ဦးပိုင်နဲ့ ဝမ်ဘောင်ကုမ္ပဏီက ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဗျ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဗျာလို့ လျှာကို ဘတ်ကြိုးစင်ပြောသော်လဲ ကြိုက်သလောက်ပြော၊ အဲဒီပြောကြားချက်တွေဟာ ဒေသခံတွေအတွက် ငရဲမင်းကြီးရဲ့ဟားတိုက်သံတွေသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။
(Photo – 2012 March, Opening Ceremony of Lat Pa Taung Mountain Project)
2 Responses to ငရဲမင်းကြီးရဲ့ဟားတိုက်သံ (Maung Luu Yay)
mgoogyaw on November 6, 2012 at 7:15 pm
See the Chinese like Red colour,starts in every place of Burma. Burma becomes one of the Chinese province,sure.Many Burmese ladies were going to Border,to gets 30 lakhs,and becme Chinese wives to born Babies,Is that Good,and fair ? Wan swe Wan swe,wan wan swe.
Htwe on November 7, 2012 at 5:38 am
U Paing is under Than Shwe and his military thumbs. . Also Thein Sein can’t and will not against them (of course he needs to protect himself ). They have been sucking our country and all of our nation’s blood, worse than vampires. I can’t stand with U Paing.